देशको रित्तो ढुकुटी र ओली-सपना ! « Nepali Digital Newspaper
देशको रित्तो ढुकुटी र ओली-सपना !
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०४:१५
चैत्र १५ गते संघीय संसदको संयुक्त सभालाई राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गर्न लगाइयो । राष्ट्रपतिमार्फत देश स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको सगौरव घोषणा भयो । तर, राष्ट्रपतिको उक्त घोषणाको जम्माजम्मी २४ घण्टा पनि नबित्दै ओली सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्दै ढुकुटी खाली भएको जानाकारी गरायो ।
समृद्ध नेपालको सपना कोमामा पुऱ्याउने ‘रित्तो ढुकुटी’को अवस्थापछि प्रधानमन्त्री ओलीको मुर्छित सपना के हुनेछ ? भन्ने चर्चा टयाक्सी ड्राइभरदेखि उनको किचेन क्याबिनेटसम्म गरिँदैछ । देशको अर्थतन्त्र भुइँचालो र नाकाबन्दीको कारण करिब समाप्तितिर लम्कीरहेको समय पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल केपी ओलीले अनेक सपना बाँड्दै जनतालाई निरास हुनबाट बचाए । उनका सपनाहरू कार्यान्वयनमा जानुअगावै सिंहदरबारको कुर्सीबाट गलहत्याइए । तिनै सपनाहरूको मार्केटिङ गर्दै दोश्रोपटक सिंहदरबारको कुर्सीमा विराजमान ‘ओली–नतिजा’ पस्कने समय आफ्नै विज्ञ अर्थमन्त्रीमार्फत स्वेतपत्र जारी गराउने बाध्यता बुझ्न नीति–कथाको सहारा लिँदैछु ।
एउटा जंगलमा थुप्रै स्याल बसोबास गर्दथे । उनीहरूबीच स्यालको सिंहासन कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा सधैंभरि चल्दथ्यो । त्यस्तैमा एउटा स्याल आफूलाई अरुभन्दा पृथक देखाउन अनेक कोशीस गरिरहन्थ्यो । बानी, रङ, आवाज, उठबस, तौरतरिका करिब उस्तै भएको कारण अन्य स्यालभन्दा पृथक देखिन अनेक जुक्ति लगाइरहन्थ्यो । एकदिन उसले अन्य स्यालभन्दा अलग देखिन एउटा पोथी बाघसँग विवाह गर्यो । विवाहको भोलिपल्ट बाघको छोरीले स्याललाई भनिन्– ‘बुढा मलाई भोक लाग्यो । सिकार चाहियो ।’
०४६ को परिवर्तनसँगै अनेक नाममा पश्चिमा इसाईहरू डलर बोकेर ढोकाबाटै नेपाल प्रवेश गरे । किताब च्यात्दै मुलुक बनाउन हिँडेका युवाहरू प्रजातन्त्रमा आफ्नो भविष्य अनिश्चित बन्न जाँदा अनेक छिद्र्र खोज्न हतारिए । तात्कालीन दरबार, भारत र इसाईको स्वार्थ मिल्न जाँदा काङ्ग्रेसलाई सत्ता, एमालेलाई सडक र एनजिओ, माओवादीलाई जंगल दिलाउन सफल भए । २०४६ मा गुमेको अधिकार फिर्ता लिने तात्कालिन दरबारको दाउ, भारतीय नेहरू र इन्दिराको सपना, इसाईको दीर्घकालिन रणनीतिमा प्रयोग भएका नेपालका राजनैतिक दलहरू द्वन्द्व र शान्ति उद्योगको कच्चा पदार्थमा परिणत हुन पुगे ।
जीवनभर मरेको मात्र खाने स्याल श्रीमतीको प्रस्तावले झस्किन पुग्यो । सिकार गर्न जान्छु भन्दै जंगलको एउटा गुफामा दिनभर सुतेर घर फर्कियो । साँझपख खालीहात घर फर्किएको आफ्नो बुढोलाई पत्नीले भनिन्– ‘भोली पनि सिकार नल्याए तिमीलाई नै खाइदिन्छु ।’ उज्यालो हुनासाथ निराश स्याल सिकारको खोजीमा हिँड्यो । थुप्रै हिँडिसक्दा पनि कुनै सिकार गर्न सकेन । निरास हुँदै बाघको छोरीले खाने भई भन्दै गुफातिर फर्किंदै गर्दा एक ठूलो हात्ती घाइते अवस्थामा लडिरहेको देख्यो । अत्यन्त हर्षित हुँदै दौडिएर पत्नीसामु पुग्यो र भन्यो– ‘मैले धेरै ठुलो हात्तीको सिकार गरेको छु, ल्याउन सकिनँ, तिमी मसँगै हिँड ।’
बुढाको कुरा सुन्नासाथ खुसी हुँदै स्याल–पत्नी हात्तीसामु जान तयार भइन् । स्यालको पछि लाग्दै हात्तीसामु पुगेकी स्याल–पत्नीले घाइते हात्तीलाई फडक्क नाघ्दै रगत चुस्न थालिन् । बिचरो स्याल हात्तीलाई नाघ्न नसक्दा यताउता हेर्न थाल्यो । पत्नीले स्याललाई भनिन् । के हेरेको । फड्केर यता आउ न । आफू फड्किन नसक्ने कुरालाई ढाकछोप गर्न स्यालले जुक्ति लगाउँदै भन्यो– ‘फडकिन नसकेको हैन, सुँड कता पुच्छर कता हेरेको नि !’
राजनैतिक अधिकारप्राप्तिको नाममा मुलुकलाई दरिद्र बनाइयो । दोश्रो नाकाबन्दीकै समयमा प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनको सहयोगी बन्दै भारतीय–सत्ता झ्यालबाट काठमाडौं पस्न सफल भयो । ०४६ को परिवर्तनसँगै अनेक नाममा पश्चिमा इसाईहरू डलर बोकेर ढोकाबाटै नेपाल प्रवेश गरे । किताब च्यात्दै मुलुक बनाउन हिँडेका युवाहरू प्रजातन्त्रमा आफ्नो भविष्य अनिश्चित बन्न जाँदा अनेक छिद्र्र खोज्न हतारिए । तात्कालीन दरबार, भारत र इसाईको स्वार्थ मिल्न जाँदा काङ्ग्रेसलाई सत्ता, एमालेलाई सडक र एनजिओ, माओवादीलाई जंगल दिलाउन सफल भए । २०४६ मा गुमेको अधिकार फिर्ता लिने तात्कालिन दरबारको दाउ, भारतीय नेहरू र इन्दिराको सपना, इसाईको दीर्घकालिन रणनीतिमा प्रयोग भएका नेपालका राजनैतिक दलहरू द्वन्द्व र शान्ति उद्योगको कच्चा पदार्थमा परिणत हुन पुगे । नियोजित रुपमा नवबुर्जुवा जन्माउँदै राज्यलाई कमजोर बनाउने इसाई नीतिलाई बुझ्ने ल्याकत गुमाएको नेतृत्वले पद र पैसा बाहेक केही देखेन । चाहेको भए गोर्खालाई गुल्जार बनाउन सक्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले चिनेको इसाई–मनलाई बुझ्न नसक्ने नेतृत्वको कारण मुलुक हरक्षेत्रमा रित्तो र खोक्रो बनेको ओली सरकारले भर्खरै देख्दैछ ।
जसरी भए पनि आफ्नो सपना साकार गरी छाड्ने रणनीतिअनुरुप चालिएको ओली–कदम अन्ततः इसाई एजेण्डालाई संविधानमा समावेश गर्न राजी हुनासाथ सफलताउन्मुख हुन पुग्यो । माओवादी ज्यादतीको विरोधमा निर्माण भएको ओली–छवी भारतीय नाकाबन्दीपछि विगतका कमजोरीलाई छोप्न सफल भयो । जीवनभर विरोधको मात्र राजनीति गरेका चतुर केपी ओलीले अनेक चाल–जालबाट प्राप्त सफलतालाई दीगो राख्न सम्भव–असम्भव सपना जनतामाझ छरीदिए ।
सङ्घीयताले अथाह खर्च बढाएको, राजश्व बढ्न नसकेको, ब्यापार घाटा चुलिएको, रेमिट्यान्स घट्दै गएको, पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएको अर्थमन्त्रीले बताइरहनु पर्दैन । प्रम ओली र जनताले खोजेको विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट समस्या र कारण हैन, समाधान हो ! विज्ञ अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा देखाएका तथ्यहरू आफै बनेका हैनन् । नेपालको ढुकुटी आफै खाली भएका पनि हैनन् । अर्थतन्त्रको यस्तो दुर्दशा कसले बनाए ? यसको रोकथाम के–के हुन् ? सरकारमा बस्नेहरूले गरेको राज्यदोहन कसरी असुलउपर गरिन्छ ? कारवाहीको दायरामा क–कसलाई ल्याइँदैछ ? ओली सरकारले काट्ने केक, वैदेशिक भ्रमण, आफ्नै उपचार खर्च, कलाकारको भोज निजी हुन् कि अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भएका ? तमाम जिज्ञासा जनतासामु पुगिसकेका छन् । वैधानिक भ्रष्ट्राचारभन्दा अवैधानिक सेटिङबाट आक्रान्त मुलुक कर्मचारीलाई धम्क्याएर नतिजा प्राप्त गर्ने बाटो रोज्दैछ । सामान्य कर्मचारी पाल्न पुग्ने राजश्वको भरमा बाँडिएको समृद्धिको सपना जातीय राजनीति र संघीयताको मारमा सहिद बन्ने सम्भावना बढ्न जाँदा श्वेतपत्रको नाटक खेलिएको मान्नेहरू बढदैछन् ।
२०२८ सालमा बीस वर्षको आसपास हिँडिरहेका केही ठिटाहरूले देश बनाउने सपना देखे । केपी ओली त्यस अभियानमा छुटेनन् । पञ्चायतको चर्को दमनको बीच देश बनाउने अभियान १४ वर्ष जेलमै सड्न पुग्यो । २०४४ सालपछि करिव १० बर्षको खुला जीवन बिताउँदै गर्दा देश बनाउने सपनालाई स्थगित गर्दै आफु बन्नेतिर ओली–कदम लम्किएको पुष्टि महाकाली सन्धीमा उनको भूमिकाले गरीदियो । न त सत्तापक्षको नेता न प्रतिपक्षको हुँदाहुँदै फगत आफ्ना सपनाको निम्ति उतैको आशीर्वाद प्राप्त गर्न खेलिएका तमाम खेल नेपाली जनताबीच बदनाम हुन पुग्यो । जसरी भए पनि आफ्नो सपना साकार गरी छाड्ने रणनीतिअनुरुप चालिएको ओली–कदम अन्ततः इसाई एजेण्डालाई संविधानमा समावेश गर्न राजी हुनासाथ सफलताउन्मुख हुन पुग्यो । माओवादी ज्यादतीको विरोधमा निर्माण भएको ओली–छवी भारतीय नाकाबन्दीपछि विगतका कमजोरीलाई छोप्न सफल भयो । जीवनभर विरोधको मात्र राजनीति गरेका चतुर केपी ओलीले अनेक चाल–जालबाट प्राप्त सफलतालाई दीगो राख्न सम्भव–असम्भव सपना जनतामाझ छरीदिए ।
नयाँ शिक्षा लागु गर्ने नाममा २०२८ सालदेखि जरा गाडेको इसाई मेशेनरीले खोक्रो पारेको मुलुकको जर्जर अवस्था सुशासनको निम्ति अत्यन्त ठुलो बाधक बनिसकेको छ । नेपालको क्रीम दिमागलाई डलर र युरोमा किन्ने, अधिकार प्राप्तिको नाममा विधि विधानलाई कुल्चन प्रोत्साहित गर्ने, अस्तब्यस्तताको नाममा समानान्तर सत्ता चलाउने, केवल कागजमा प्रगति विवरण खोज्दै पढे–लेखेको जमातलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत भ्रष्ट बन्न सिकाउने, विकृति–विसंगती, ढिलासुस्ती, अराजकता, लोकाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जानाजान जन्माउने र हुर्काउने, राज्यका सम्पुर्ण अंगलाई कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त बनाइदिने, जनता र सरकारको बीच ठुलो दुरी सिर्जना गरी दिने, राज्य सत्तामा बसेको मानिसलाई जनताको नजरबाट गिराइदिने, मिडियामार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न पैसाको खोलो बगाउने, गरीब र अशिक्षित मानिसलाई धर्म परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृतिमाथि नियोजित हमला गर्ने, जातीय पहिचान र जातको विष फैलाउन डलर युरोको खोलो बगाउने इसाई गतीविधिहरू ओली सपनाको निम्ति घाइते हात्तीसमान भइसकेका छ । इसाई पैसाले मात्र नपुगेर उपचार खर्च, छोराछोरीको अध्ययन, दैनिक राजनीति सञ्चालन खर्च र अनेक फाउण्डेसन सञ्चाल गर्न भारतीय दुताबासबाट लिएको आशिर्वादले दरिद्र भएको मुलुक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराउँन शुद्धीकरणको अग्नीकुण्डमा प्रवेश गर्नु पर्नेछ ।